အိမ်မှာ သုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အပေါ်မူ တည်ပြီး မီတာခ တစ်လစာ ကိုကြို တွက်ထား လို့ရပါတယ် (ရှယ်ထားပေးကြပါအုံး .. ) – Let Pan Daily
အိမ်မှာ သုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အပေါ်မူ တည်ပြီး မီတာခ တစ်လစာ ကိုကြို တွက်ထား လို့ရပါတယ် (ရှယ်ထားပေးကြပါအုံး .. )
“အိမ်သုံးမီတာခ ဘယ်လောက် ကျမလဲ တွက်လို့ ရပြီ”
မီးပူ -၁၂၀၀ ဝပ် — ၅.၂ အမ်ပီယာ
မီးဖို — ၁၆၀၀ ဝပ် — ၇ အမ်ပီယာ
တီဗွီ+စလောင်းစက် — ၄၀၀ ဝပ်.. ၁.၈ အမ်ပီယာ
အဝတ်လျှော်စက်–၂၀၀ ဝပ်.. ဝ.၉ အမ်ပီယာ
ရေမော်တာ— ၁၂၀၀ ဝပ်…. ၅.၂ အမ်ပီယာ
အဲကွန်း….၁၂၀၀ ဝပ်….၅.၂ အမ်ပီယာ
မီးသီး+မီးချောင်း — ၁၅၀ ဝပ်… ဝ.၇ အမ်ပီယာ
အခြားအသုံးအဆောင်များ…၅ အမ်ပီယာ..– ၃၁ အမ်ပီယာ
အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံး၏ခံနိင်ရည် ဝန်အားသည်(5/30) Amp. (10/30) Amp. အများဆုံး ၃၀အမ်ပီယာထိ အသုံးခံနိင်ရည်ရှိပြီး အထက်ပါပစ္စည်းများ
အားတစ်ပြိုင်နက်သုံးစွဲနေပါက ( တစ်နာရီလျှင်) မီတာယူနစ်တက်နှူန်း kilo watt per hour (Kw/hr)
VI = W သည် 230v x 30A = 6900 Watt=7Kw =7Unit. ဖြစ်နေ၍ တစ်ရက်လုံး ပစ္စည်းပြုံသုံးချိန်တစ်နာရီဆိုက တစ်ရက်လျှင် ၇ယူနစ်ဖြင့်တစ်လစာယူနစ်၂၂၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်မည်။
အထက်ပါပစ္စည်းများခွဲခြားအသုံးပြုချိန်အတွက်တစ်ရက် ၁၀ယူနစ်ဖြစ်က တစ်လယူနစ်၃၃၀ ထပ်ပေါင်းက(၂၂၀+၃၃၀)=၅၅၀ ယူနစ်ဝန်းကျင်မီတာတက်ပါမည်။ သာမန်မိသားစုတစ်လသုံးမီတာခ= ၅၅၀ယူနစ်အလွှာမခွဲ တစ်ယူနစ် ၃၅ကျပ်ဖြင့် တစ်လနှစ်သောင်းခန့် ကျပြီး နယ်စပ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထမီးလင်းရေးနယ်ပယ်တစ်ယူနစ်၃၅၀ကျပ်ဖြင့်သုံးက တစ်လ ကျပ်နှစ်သိန်းခန့်ကျမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအိမ်သုံးမီတာအားမည်သည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသုံးနိင်ပြီး ဝန်အားခံနိင်ရည်အမ်ပီယာ (သို ဝပ်အားအခြေအနေမည်မျှထိရှိနိင်လဲဟုသိချင်သူများအားရည်ရွယ်ရေးသားပါသည်။ ယခင်ကတပ်ထားသောAnalog နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာတံဆိပ်ဟောင်းများ တွင်တောက် လျှေက်သုံး အမ်ပီယာ၃၀ ထက်ကျော်သုံးလည်းဝန်ပိုဒဏ်ကြေးရိုက်ခံရမူမရှိပါ၊ အခန့်မသင့်က မီတာလောင်မူများသာဖြစ်တတ်သည်။ ယခု၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလမှစတင်အသစ်ထုတ်ပေးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာအသစ်(ပုံပါတံဆိပ်)သည် သတ်မှတ် ဝန်အား ၃၀ အမ်ပီယာ ကို တောက်လျှောက် တစ်နာရီထက်အချိန်ပိုမိုသုံးပါက ယင်းမီတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသောရုံးထိုင်ဆာဗာကွန်ပျူတာတွင် Overload Error ဟု ဖော်ပြနေမည် ဖြစ်သည်။ မိမိအိမ် လစဉ် ယူနစ်တွက်ချက်တတ်ပြီး မီတာခ အနည်းအများ ချိန်ဆနိင်ကြပါစေသော်။
“အိမျသုံးမီတာခ ဘယျလောကျ ကမြလဲ တှကျလို့ ရပွီ”
မီးပူ -၁၂၀၀ ဝပျ — ၅.၂ အမျပီယာ
မီးဖို — ၁၆၀၀ ဝပျ — ၇ အမျပီယာ
တီဗှီ+စလောငျးစကျ — ၄၀၀ ဝပျ.. ၁.၈ အမျပီယာ
အဝတျလြှျောစကျ–၂၀၀ ဝပျ.. ဝ.၉ အမျပီယာ
ရမေျောတာ— ၁၂၀၀ ဝပျ…. ၅.၂ အမျပီယာ
အဲကှနျး….၁၂၀၀ ဝပျ….၅.၂ အမျပီယာ
မီးသီး+မီးခြောငျး — ၁၅၀ ဝပျ… ဝ.၇ အမျပီယာ
အခွားအသုံးအဆောငျမြား…၅ အမျပီယာ..– ၃၁ အမျပီယာ
အိမျသုံးမီတာတဈလုံး၏ခံနိငျရညျ ဝနျအားသညျ(5/30) Amp. (10/30) Amp. အမြားဆုံး ၃၀အမျပီယာထိ အသုံးခံနိငျရညျရှိပွီး အထကျပါပစ်စညျးမြား
အားတဈပွိုငျနကျသုံးစှဲနပေါက ( တဈနာရီလြှငျ) မီတာယူနဈတကျနှူနျး kilo watt per hour (Kw/hr)
VI = W သညျ 230v x 30A = 6900 Watt=7Kw =7Unit. ဖွဈနေ၍ တဈရကျလုံး ပစ်စညျးပွုံသုံးခြိနျတဈနာရီဆိုက တဈရကျလြှငျ ၇ယူနဈဖွငျ့တဈလစာယူနဈ၂၂၀ ဝနျးကငျြဖွဈမညျ။
အထကျပါပစ်စညျးမြားခှဲခွားအသုံးပွုခြိနျအတှကျတဈရကျ ၁၀ယူနဈဖွဈက တဈလယူနဈ၃၃၀ ထပျပေါငျးက(၂၂၀+၃၃၀)=၅၅၀ ယူနဈဝနျးကငျြမီတာတကျပါမညျ။ သာမနျမိသားစုတဈလသုံးမီတာခ= ၅၅၀ယူနဈအလှာမခှဲ တဈယူနဈ ၃၅ကပျြဖွငျ့ တဈလနှဈသောငျးခနျ့ ကပြွီး နယျစပျ ကိုယျထူကိုယျထမီးလငျးရေးနယျပယျတဈယူနဈ၃၅၀ကပျြဖွငျ့သုံးက တဈလ ကပျြနှဈသိနျးခနျ့ကမြညျဖွဈသညျ။
လကျရှိအိမျသုံးမီတာအားမညျသညျ့လြှပျစဈပစ်စညျးမြားသုံးနိငျပွီး ဝနျအားခံနိငျရညျအမျပီယာ (သို ဝပျအားအခွအေနမေညျမြှထိရှိနိငျလဲဟုသိခငျြသူမြားအားရညျရှယျရေးသားပါသညျ။ ယခငျကတပျထားသောAnalog နဲ့ဒဈဂဈြတယျမီတာတံဆိပျဟောငျးမြား တှငျတောကျ လြှကျေသုံး အမျပီယာ၃၀ ထကျကြျောသုံးလညျးဝနျပိုဒဏျကွေးရိုကျခံရမူမရှိပါ၊ အခနျ့မသငျ့က မီတာလောငျမူမြားသာဖွဈတတျသညျ။
ယခု၂၀၁၈ခုနှဈ ဧပွီလမှစတငျအသဈထုတျပေးသော ဒဈဂဈြတယျမီတာအသဈ(ပုံပါတံဆိပျ)သညျ သတျမှတျ ဝနျအား ၃၀ အမျပီယာ ကို တောကျလြှောကျ တဈနာရီထကျအခြိနျပိုမိုသုံးပါက ယငျးမီတာနဲ့ခြိတျဆကျထားသောရုံးထိုငျဆာဗာကှနျပြူတာတှငျ Overload Error ဟု ဖျောပွနမေညျ ဖွဈသညျ။ မိမိအိမျ လစဉျ ယူနဈတှကျခကျြတတျပွီး မီတာခ အနညျးအမြား ခြိနျဆနိငျကွပါစသေျော။ STG
ဆီးသွားရင် အောင့်တယ် ကျင်တယ် ဆိုပြီး ခံစား နေရလျှင် ..
ကမ္ဘာ့ အသက်ကြီးဆုံးအဘွားအိုထက် ၄ နှစ် ပိုကြီးသူ မြန်မာနိုင်ငံ မှ အဘွားဒေါ်မြကြည် (လက်ဆင့်ကမ်း Share ပေးပါရန်)
အမျိုးသမီး တွေ အမှန် အတိုင်း ဖွင့်ပြောလေ့ မရှိတဲ့ အချက်(၄)ချက်…